हाम्राे पिपलबाेट » युर्टन इन्टरनेशनलबाट उत्पादित सामग्रीहरु दिर्घरोगीहरुको मलमपट्टी बनेको छ :ठकुरी युर्टन इन्टरनेशनलबाट उत्पादित सामग्रीहरु दिर्घरोगीहरुको मलमपट्टी बनेको छ :ठकुरी – हाम्राे पिपलबाेट
युर्टन इन्टरनेशनलबाट उत्पादित सामग्रीहरु दिर्घरोगीहरुको मलमपट्टी बनेको छ :ठकुरी
युर्टन इन्टरनेशनल प्रालिले नेपाली अनुभवी उद्यमीहरु र जागरुप युवाहरुद्धारा २०७४ सालमा आफ्नो संस्था स्थापना गरी डिप्रेसन,स्तन क्यान्सर,रक्त क्यान्सर,कलेजो तथा मृगौला सम्वन्धी रोग ,कम्मर तथा हाडजोर्नी, नशा खुम्चिएको,बाथ रोग,गर्घन तथा घुडा दुखाई लगायत विभिन्न रोगहरु विरुद्ध निको गराउनका लागि रोयल जेली,बि प्रपोलिस,मौरी चोप,बि पोलन,मौरी कुट,आकासिया मह बि बे्रड, मौरी विष,विनम क्रिम जस्ता सामग्रीहरु बजारमा ल्याएको छ । यसै विषयबस्तुमा पीपलबोट राष्ट्रिय दैनिकले युर्टन इन्टरनेशल प्रालिका मेनेजिङ्ग डाइरेक्टर बिरेन्द्र शिह ठकुरी संग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीको अंश :
१) तपाईको परिचय ?
नमस्कार मेरो नाम बिरेन्द्र शिह ठकुरी हाल कोहलपुर नगरपालिका वडा नं.२ मा बसोबास गर्दछु । केही समयदेखी यस युर्टन इन्टरनेशनल प्रालिमा दिर्घरोगी तथा निरोगीहरुका लागि नेपाली जडीबुटीबाट उत्पादित सामग्रीहरुबाट सेवा गर्दै आएको छु ।
२)युर्टन इन्टरनेशनल प्रालिको बारेमा बताइदिनुहोस् न ?
प्रश्नका लागि धन्यवाद , २०७४ साल माघ ५ गते नेपाल सरकार क्याबिनेट बैठकबाट यो प्रा।लि। पारित भएको हो । सोही ऐन अन्र्तगतको नियमावलीको अधिनमा रही काम गर्ने गरि २०७७ असार २६ गते नेपाल सरकार वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागबाट बस्तुको प्रत्येक बिक्रि गर्ने कम्पनीको रुपमा लाइसेन्स प्राप्त गरेको छ । विशेषगरी नेपालमा रहेका जडिबुटीहरुबाट उत्पादन गरेका बस्तुहरुलाई सेवाग्राहीहरुको घरघरमा पु¥याउने कार्य भइरहेको छ ।
३)नेपाली जडिबुटीबाट उत्पादन त भन्नुभयो तपाईहरुको कम्पनीले उत्पादन गरेका सामग्रीहरु के–के हुन ?
हाम्रो कम्पनीले उत्पादन गरेका सामग्रीहरु मध्ये रोयली जेली रहेको छ । जुन तत्वहरु भिटामिन ए, बी ५ सि ,डी ई लगायत विभिन्न प्रकारका भिटामिन, मिनरल हाडड्रोक्सी एसिड लेसिथिन इन्जाइम, तथा अन्य जेनेटिक तत्वहरु मिश्रीत रहेको छ । मौरी आफ्ना बच्चाहरुलाई रानो मौरीलाई खुवाउन बनाइएको विशिष्ट उपहारको रुपमा पनि लिइन्छ् । यस सामग्रीले कलेजो, मृगौला, स्तन क्यान्सर, रक्तचाप,प्रजनन शक्ति कमजोर भएका र डिप्रेसन हुने,रेडव्लड सेलहरुमा समस्या भएका बिरामीहरुका लागी निकै उपयुक्त मानिन्छ । त्यसैगरी बि प्रपोलिस,मौरी चोप, बि पोलन,मौरी कुट, आकासिया मह ,बि ब्रेड लगायतका सामग्रीहरु उपलव्ध रहेका छन् । मानव शरिरलाई स्वस्थ्य एव दिर्धरोगीहरुका लागि रोगबाट निको बनाउन यी सामग्रीहरु निकै उपयुक्त मानिएका छन् ।
४) तपाईहरु जस्तै अन्य नेपाली जडिबुटीबाट उत्पादित भएका सामग्रीहरु आएका छन् तपाई र अन्य कम्पनीमा फरक के हो ?
बजारमा हामीजस्तै अन्य कम्पनीहरु पनि नेपालमा उत्पादन भएका सामग्रीहरु बिक्रि वितरण गर्ने कम्पनीहरु दर्जनौ आएका छन् । विशेषगरी हाम्रो कम्पनीले उत्पादन गरेका सामग्रीहरुबाट दिर्गरोगहरुले बाँकेका विभिन्न गाँउपालिका , नगरपालिका, उपमहानगरपालिकामा सेवाग्राहीले प्रयोग गर्दै आएका छन् । हामी सन्तोष के मा छौँ भने सेवाग्राहीले युर्टन इन्टरनेशनल प्रालिबाट उत्पादन भएका सामग्रीहरुले दिर्घरोगीहरुको शारिरिक अवस्था परिवर्तन भएको छ उदाहरणको लागि भनुहुन्छ भने बैजनाथ गाँउपालिका वडा नं. ८ पितमारीकी रेस्मा केसीको पाठेघर क्यान्सर भएको थियो । उहाँको अवस्था अहिले बिस्तारै सामान्य बन्दै गएको छ । त्यस्तै कोहलपुर नगरपालिका वडा नं.२ का मान बहादुर देवकोटा प्रेसरको समस्या थियो अहिले युटर्न इन्टरनेशनल प्रालिले उत्पादन गरेका नेपाली जडिबुटीका सामग्रीहरु प्रयोगबाट बिस्तारै निको हुँदै गएको छ ।
५) तपाईको कुन कुन ठाँउबाट सेवा दिइरहनुभएको छ ?
देशभरमा हाम्रा युर्टन इन्टरनेशनल प्रालिका बिक्रि केन्द्रहरु रहेका छन् । बाँकेको कोहलपुरबाट पनी तपाईले सेवा दिन सक्नुहुन्छ । देशका प्रमुख शहर र हरेक स्थानिय तहबाट पनि सेवा दिने हाम्रो तयारी भइरहेको छ ।
६) नेपालमा जडिबुटी बनेका सामग्रीहरु उत्पादन हुन्छन् तर सेवाग्राहरु सन्तोष छैनन भन्ने सुनिन्छ र खास तपाईहरुको उदेश्य के हो ?
अहिले नेपालमा जडिबुटीबाट उत्पादन भएका सामग्रीहरुको प्रतिस्पर्धा संगै सेवाग्राहीको बिचमा राम्रो सम्वन्ध र विश्वास नहुनै प्रमुख चुनौती रहेको छ । तर हामीले सेवाग्राहीहरुको मर्म र सेवाग्राहीको बास्तविक समस्या पहिचान गरी काम गर्दै आएका छौँ । हाम्रो उदेश्य भनेको नै निरोगी बन्ने प्रमाणिक तरिकाहरुको प्रयोगका साथमा नबीनतम् व्यवसायीक पद्धतिको सदुपयोग गरी मानब जातिहरुलाई मौरीबाट उत्पादित बस्तुहरुले स्वास्थ्य, सम्पन्न ,खुसी र सकरात्मक जीवन जिउन अभिप्रेरित गर्ने नै हो ।
७) विशेषगरी नेपालमा उत्पादनमा र जडिबुटीबाट उत्पादन भएका सामग्रीहरु कतिको महंगो छ ?
प्रश्नका लागि तपाईलाई धन्यवाद । नेपालमा उत्पादन भएका र विशेषगरी हाम्रो युटर्न इन्टरनेशनल प्रालिबाट उत्पादन भएका सामग्रीहरु मंहगो भने छैन । सबैभन्दा ठुलो रोग हो रोगलाई सन्चो गराउनका लागि सेवाग्राहीले लाखौँ रकम खर्च गरेको हुन्छ । तर नेपालमै उत्पादन भएको कुनैपनी असर नगर्ने सामग्रीहरु सेवाग्राहीको घरदैलोमा लिदा झनै माग बढेको छ । बिस्तारै सेवागाह्रीले पनी यसको महत्व बुझ्दै हुनुहन्छ भन्ने मेरो भनाई हो ।
८)अन्तमा तपाईको केही भन्नुछ ?
अन्तमा युर्टन इन्टरनेशनल प्रालिबाट उत्पादन भएका दिर्गरोगी वा स्वास्थ्य मानिसहरुले पनी प्रयोग गर्न मिल्ने सामग्रीहरु प्रयोग गरौँ नेपालमै उत्पादन भएका सामग्रीहरु प्रयोग गरि आफ्नो स्वास्थ्य सधै सुरक्षित बनाऔँ र अल्वर्ड आएस्टाइनले भनेका छन् यदि विश्वबाट मौरी लोप भयो भने बाँकी चार वर्षमात्र मानव जातिको अस्तित्व रहनेछ भनेका छन् यसै भनाईलाई आत्मसाथ गर्दै नेपाली जडिबुटीलाई समयमै पहिचान गर्न जरुरी छ । धन्यवाद
१ माघ २०७७ मा प्रकाशित
रोकिराखेको बसमा अज्ञात समूहद्वारा आगजनी
मानव बेचबिखन नियन्त्रण समितिसँगको वार्षिक समिक्षा कोहलपुरमा
राप्तीसोनारीद्वारा सर्पदंशलाई एम्बुलेन्स सहयोग